Coquitos ovy - Recipe Thermomix | ThermoRecipes
fitsangatsanganana41 minitraOlona 4835 kaloria
Ireo coquitos ovy ireo dia mora toa mahagaga. Namboarina tamin'ny fangaro 3 fotsiny, izy ireo no sakafo faran'izay tsara aorian'ny sakafo hariva.
Tsy misy afa-tsy ovy, voanio ary siramamy izy ireo, noho izany dia tsara izy ireo manompo amin'ny fivoriana misy vegan na celiac ary tsy mahazaka gluten, atody ary lactose.
Izy ireo koa dia tena mora entina satria izy ireo dia azo apetraka ao anaty fitoeran-javatra misy fanidiana hermetika ary hitondra azy ireo amin'izay tianao.
1 Coquitos ovy
2 Te hahafantatra bebe kokoa momba ireo coquitos ovy ireo ve ianao?
Sakafo maraina matsiro vita amin'ny ovy, siramamy ary voanio fotsiny.
Karazan-tsakafo: sakafo maivana
Fotoana hiketrehana: 21M
Fotoana manontolo: 41M
250 g ovy voahodina
Voanio grated 150 gr
Napetrakay tao anaty sobika ireo ovy voahitsakitsaka ary notapahinay tao anaty harona.
Mameno rano ny vera hatramin'ny marika voalohany izahay, mametraka ny sobika ao anaty vera sy programa 20 minitra, varoma, hafainganana 2.
Rehefa lasa ny fotoana dia esorintsika ny sobika, atsipintsika ny rano ary, tsy ampiasana azy dia ampio ny ovy, voanio ary siramamy masaka. Torotoro izahay mandritra 15 segondra, hafainganam-pandeha 3, fihodinana havia.
Ampidininay ny koba miraikitra amin'ny rindrina ary potehinay indray mandritra 15 segondra, hafainganam-pandeha 3, fihodinana havia.
Manafana ny lafaoro hatramin'ny 170º amin'ny mpankafy izahay.
Mandritra izany fotoana izany dia manao baolina 10 grama eo ho eo izahay ary apetrakay eo amin'ny lovia feno taratasy an-dakozia.
Rehefa efa nafanaina ny lafaoro dia atsofontsika ny lovia ary atsofohy mandritra ny 15 minitra na mandra-pahazoan'ny loko loko volamena tena maivana.
Manala izahay ary avela hangatsiaka.
Amin'ny fotoam-panompoana dia apetrantsika amin'ny lovia tsara izy ireo.
Te hahafantatra bebe kokoa momba ireo coquitos ovy ireo ve ianao?
Misy izany recette coquitos isan-karazany fa ireo an'ny ovy Izy ireo no mahomby indrindra ao an-trano satria tsotra be ny manamboatra azy ireo ary tsy misy gluten, ahitra, atody na ronono.
Ankoatr'izay, ny tsotra ho tianao ireo coquitos ovy ireo. Tsy noho ny lisitry ny akora fohy fotsiny, fa koa satria ny fanomanana azy dia mofomamy iray.
Mora be izy ireo ka tena mety aminy mahandro miaraka amin'ny ankizy. Hahafaly azy ireo ny mandanja ireo akora sy manao baolina. Afaka minitra vitsy dia azonao atao ny mahita ny valiny farany ary mizara izany amin'ny namanao.
Tsy dia misy fanovana betsaka azo atao amin'ity recette ity satria misy ny azy ilaina ny fangaro ary, raha manova azy ireo isika dia tsy hahazo fomba fahandro mitovy. Ka ny zavatra tsara tokony hatao dia ny mifikitra aminy.
Afaka foana Ao anaty kaontenera tsy misy rivotra ary, raha mafana be dia mamporisika anao aho hitahiry azy ireo ao anaty vata fampangatsiahana. Na dia manankarena be aza izy ireo ka tsy mino aho fa hanana fotoana hararaotina.
Fanazavana fanampiny - Coquitos
Mitadiava fomba fahandro hafa momba ny: Celiac, Tsotra, Tsy mahazaka laktose, Tsy mahazaka atody, Fivarotana mofomamy
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Thermorecetas » Resipeo thermomix » Fivarotana mofomamy » Coquitos ovy
Mofomamy sy mofomamy paoma
Mofomamy strudel voanjo sy paoma